Qaybta qulqulka qulqulka, waxaan sidoo kale ugu yeernaa rake firfircoon, markaan u baahanahay ballayaasha in si habsami leh oo dhaqso leh looga dhaqaajiyo dhinac ilaa dhinaca kale iyada oo aan la helin caawimaad forklift iyo halka ugu horreysa ee laga soo baxo, marka hore (FIFO) ayaa loo baahan yahay ayaa kuu noqon doonta xulashada kuugu fiican.
Tuujinta sariirtaada waa nidaam kaydinta maareynta maaddada oo loogu talagalay in lagu keydiyo alaabada laxray. Waxaa jira noocyo badan oo ah sariirtaada sariirta, xarkaha xulashada ayaa ah nooca ugu caansan, kaas oo u oggolaanaya in lagu keydiyo walxaha palletized ee safafka jiifka leh heerar kala duwan.
Rikoodhada Cantilever way fududahay in la rakibo oo la rogrogmi karo si loo kaydiyo culeysyo dhaadheer oo waaweyn oo aad u badan sida alwaax, tuubooyin, guntin, plywoods iyo wixii la mid ah. Qalabka Cantilever wuxuu ka kooban yahay tiir, saldhig, cudud iyo dhejis.
Nidaamka raritaanka baaburku waa nidaam kaydin cufnaan badan oo u adeegsada gawaarida si otomaatig ah loogu qaado sariirta lagu raro tareennada tareenka ku jira.
Nidaamka raajista moobiilka korontadu waa nidaam cufnaan sare leh oo lagu hagaajinayo booska bakhaarka, halkaas oo rakibayaasha lagu dhejiyo shaashadda moobiilka oo lagu hagayo waddooyinka dhulka ku yaal, in kasta oo qaabeynta horumarsan ay shaqeyn karto bilaa waddo.
Mashiinnada birta ah waa badeecooyin ku habboon beddelka santuuqyada alwaax dhaqameedka iyo bacaha balaastikada ah. Waxay ku habboon yihiin hawlgallada forklift waxayna ku habboon yihiin helitaanka alaabada. Badanaa waxaa loo isticmaalaa keydinta dhulka ujeedooyin badan, keydinta shelf
Nidaamka keydinta saxda ah wuxuu kordhin karaa booska keydinta wuxuuna keydin karaa waqti badan oo shaqeynaya, Push back rack waa nidaam noocan oo kale ah oo kordhiya booska keydinta iyadoo la dhimayo jidadka forklifts iyo keydinta waqtiga howl wadeenada ee ku dhex socda haadka gawaarida sida waxa ka dhaca darawalnimada rack.